Nhazi omenala - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Omenala LCD Ngosipụta Module, LCM, TFT, Ngosipụta omenala OLED
LCD / LCM / TFT / OLED Custom / Ọkara-omenala
Ewezuga ụdị ngosi LCD / TFT / OLED dịnụ, HengTai na-enye ngosipụta akwa. Pọtụfoliyo ahụ buru ibu na-eme ka o kwe omume ịmepụta ihe edozi maka ndị ahịa iji kwado ngwa ha. Anyị nwere teknụzụ ngosipụta dị elu iji dị na nhazi gị ma ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla ịchọrọ ịgbanwe banyere otu n'ime ngosi LCD / TFT / OLED anyị dị ugbu a, anyị nwere ike ime ya. N'ihe kariri afọ iri abụọ na otu, ndị ahịa anyị na ndị ọrụ injinia ga-anọnyere gị site na usoro mmepe niile ma hụ na ọkara ma ọ bụ mmezi zuru ezu ngosipụta ngosipụta ahaziri nke ọma maka ngwa onye ọ bụla.
Anyị LCD / TFT / OLED omenala imewe ngwọta dị dị iche iche nhọrọ dị ka ndị ahịa chọrọ. HengTai nwere ike ịnye nhọrọ dị iche iche na ụdị ncha ọkụ, ntụtụ na njikọ, eriri, ihuenyo mmetụ resistive (RTP) na ihe nrụpụta nwere ikike (PCAP) ma ọ bụ mgbochi ngosiputa ma ọ bụ mgbochi mkpuchi, ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi omenala, ZIF PPC ma ọ bụ bọọdụ PCB ahaziri. ma ọ bụ ihe ngwọta zuru oke maka ngwa ngwaahịa gị, yana sistemụ arụmọrụ jikọrọ.
Achọrọ enyemaka na ngwaahịa ma ọ bụ azịza ngwaahịa? Jiri ụdị a bịakwute anyị:
USB, pin na njikọ
OLED / LCM / LCD Mmezu zuru ezu
EDdị Ajụjụ OLED
Cdị Ajụjụ LCM
CDdị Ajụjụ LCD
Ahaziri aghụghọ, omenala ngosi, omenala oled ngosi, omenala mere LCD, omenala iko LCD, omenala agba LCD, omenala nyochaa size, hazie lcd na-nnọọ.
Ndị ọzọ Order Service
Companylọ ọrụ anyị nwere ike inyere ndị ahịa aka na nkwado azụmahịa niile na China, ihe niile na ọrụ ndị ahịa chọrọ ịzụta ma ọ bụ hazie (dịka ibe, ndị na-emegide ya, ndị na-ahụ maka ike, njikọta, shells, SMT, wires njikọ, sockets, wdg) gosiputa ndi n'enye ahia ka ha zitere anyi ihe a ， wee di n'otu zitere gi site na ulo oru anyi, nke a nwere ike imeziwanye oru oru ma chekwaa otutu oge na onu ahia.
Pin nkụnye eji isi mee njikọ